जतिसक्दो छिटो ओली सरकारको बहिर्गमन हुनुपर्छ : डा. संग्रौला (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
जतिसक्दो छिटो ओली सरकारको बहिर्गमन हुनुपर्छ : डा. संग्रौला (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : 2021 April 1, 1:13 pm
काठमाडौं, १९ चैत्र । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेतृ तथा सांसद डा. डिला संग्रौलाले आफ्नो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे अहिले छलफल नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर यसबारेमा कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गरिन् ।
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन चाहेको सुनाईन् ।
उनले यसबारेमा पार्टीले तत्काल निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत मत रहेको बताईन् । सांसद संग्रौलाले यही अवस्थामाट छोडेर मुलुक अघि बढ्न नसक्ने बताईन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सबै एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने पनि धारणा राखिन् । उनले अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओली सरकार ढाल्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताईन् ।
१० दिनभत्र सडकको फोहोर उठाइसक्ने
काठमाडौं, जेठ २९ । राजधानीको सडक गल्लीमा थुप्रिएको सबै फोहोर १० दिनभित्र उठाइने भएको छ
आँबुखैरेनी–मुग्लिन खण्डमा ठूला सवारीसाधन चलाउन रोक
तनहुँ, जेठ २९ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी–मुग्लिन खण्डमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालन नहुने भएका छन्